Ithegi: amagama aphambili akude | Martech Zone
Ithegi: amagama aphambili ekude
Sibukele iinkampani ezininzi zisenza oko zikubiza ngokuba luphando lwamagama aphambili kwaye ndiyamangaliswa lulwazi oluninzi abaluphosayo xa bacebisa iinkampani ukuba ngawaphi amagama aphambili ekujolise kuwo ngeendlela zabo zokuthengisa umxholo. Nayi eminye imibuzo ebalulekileyo esiyiphendulayo Ngawaphi amagama aphambili aqhuba ukuguqulwa? Ukuba awazi, ndingacebisa ukusebenzisa i-analytics ngokufanelekileyo kunye nokunika ingxelo ukuze uchonge amagama aphambili aqhuba ishishini… hayi ukugcwala. Impazamo ephambili esiyibonayo ngabaninzi
Ixesha lokuba ndiphinde ndenze iintsiba ze-SEO kwakhona! Namhlanje ndithathe isigqibo sokukhuphela izibalo zam kwiGoogle Search Console kwaye ndenza inyani ngokugcwala kwitrafikhi endiyifumanayo kuphando lwezinto eziphilayo. Martech Zone Amanqanaba aphezulu aphezulu ngokuqaqambela kwinani lamagama aphambili anezikhundla ezili- # 1 kukhuphiswano oluninzi, amagama aphambili asezantsi. Sonke siyazi ukuba iphakamileyo irenki, inyusa izinga lokucofa kwiphepha lokukhangela kwiinjini yokukhangela. Kodwa
U-Pat unesinye isithuba esihle kwibhlog yakhe malunga nentsingiselo e-Australia apho abaxhasi bezemidlalo bebona ukwehla kolwazi lwe-brand-nangona beqhubeka nokwenza izinto ezifanayo. Ithini inkcazo yobudenge? Ukuhlanya kwenza into enye kwaye ulindele iziphumo ezahlukeneyo. Ukuthengisa kunye nokuthengisa ngokungakhathali Naphina apho sifumana iArhente yeNtengiso okanye iQumrhu lokuThengisa, sikufumanisa oku akunjalo? Abantu badla ukuwuthanda umsebenzi wabo, bangahoyi